Boutique ifulethi 80 sqm - I-Airbnb
Boutique ifulethi 80 sqm
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEugenia
I-Vila Serbota ibekwe kwindawo yezokhenketho nje ngeekhilomitha ezi-3 ukusuka eCastelul de Lut (Clay Castle) emazantsi eentaba zeFagaras kunye kufuphi neTransfagarasan-highway, kuphela i-35 km ecaleni kweSibiu kunye nesikhululo sezindiza. Le lali yagcina phantse ngokupheleleyo umoya wamandulo, kwaye yaziwa njengendawo yokusukela kwi-chalet yaseNegoiu.
Umjelo omhle onqumla igadi.
Indawo ilungele abantu abayi-4-6 abafuna ukonwabela ukuhlala ngoxolo kwindawo enesango, efihlakeleyo.
Indawo erentwayo ikumgangatho wokuqala, inomnyango owahlukileyo kwaye yenziwe ngamagumbi okulala amathathu (20 sqm, 16 sqm, 35 sqm), amagumbi okuhlambela amathathu kunye nekhitshi. Iindwendwe nazo ziyakwazi ukufikelela kwigumbi lokutyela ekwabelwana ngalo kumgangatho ophantsi, kunye nokuphuma kwi-terrace evulekileyo enendawo yebarbecue.
4.92 · Izimvo eziyi-90
Kude kude noxinzelelo lwemihla ngemihla, indawo idibanisa indlela yakudala yokuhlala kunye nezixhobo zangoku.
Siya kukuvuyela ukunceda iindwendwe zethu ukusombulula zonke iimfuno ezenzekileyo kwaye sibanike ulwazi olufunekayo malunga nokuhlala kwabo kwilali yethu. Sinokufumaneka nanini na nge-sms okanye ngefowuni.